Sasana Moli - International Burmese Monks Organization: Issued by the Overseas Elderly Writers, Journalists and Young Generation of Boycotting Media Personnel and Artistes
Issued by the Overseas Elderly Writers, Journalists and Young Generation of Boycotting Media Personnel and Artistes
Issued by the Overseas Elderly Writers, Journalists and Young Generation of Boycotting Media Personnel and Artistes - Statement 3/2007
In Support of the Proper Actions taken by the Overseas Burmese Buddhist Missionary Monks
Against the Anti-Buddhist Brutal Crime of the Burmese Military Regime
Dated October 28, 2007
At an urgent meeting convened by the Most Venerable Senior Monks – Masoeyein Sayadaw and Penang Sayadaw attended by the overseas Burmese Buddhist missionary monks worldwide, it has been decided that they declare the present dictatorial rulers of Burma “destroyers of Buddha-Sasana (Buddhist Faith),” “enemies of Buddhism,” and “holders of wrong view,” for their heinous crime of resorting to violence against the Sangha –shooting, killing, beating, arresting Sangha- monks and citizens during their peaceful demonstrations. Moreover,aseries of criminal acts such as raids on monasteries, looting and plundering unspecified amount of cash and property donated to the monasteries, attempts to disgrace the glory of Sangha, imprisonment and torture of monks, and most importantly, disrobing the monks by force.
Under the prevailing circumstances, the senior monks were convinced that Buddha sasana cannot continue to flourish as long as the reign of terror continues to exist in Burma.
Therefore, the overseas Buddhist monks unanimously agreed to put in place some measures to call for:
1.apeaceful transition to democracy,
2. ending the beatings, arrests, imprisonment, torture of monks with slanderous accusations against them,
3. establishment of Overseas Burmese Sangha Organization to assist the suffering monks and holding prayer meetings of chanting patthana and paritta.
We wholeheartedly welcome and support the worldwide Sangha initiative and pledge to cooperate with the Sangha.
Win Pe (Zaw Weik/Maung Nyo)
Overseas Boycott Media Personnel and Artistes of Younger Generation
ယခုချိန်တွင် အမေရိကန်ပြည်သို့ရောက်ရှိနေကြသည့် သက်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး နှင့် ပီနန်ဆရာတော်ကြီး တို့ကဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ ကြွရောက်လာသော သာသနာပြုဆရာတော်များနှင့်အတူ မြန်မာပြည် သာသနာ ဆက်လက်ထွန်းကားရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလျက် ရှိ်ကြပါသည်။
မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည့် သံဃာတော်များ၊ ပြည်သူများကို စစ်အစိုးရသည် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများအတွင်း ၀င်ရောက်စီးနင်းပြီး သံဃာတော်များကို ဖမ်းဆီးရုံသာမက သံဃာပိုင်ဝတ္ထုငွေများ၊ သံဃိကပစ္စည်းများကို ခိုးယူခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ သံဃာ့ဂုဏ်တော်များ ညှိုးနွမ်းအောင် လုပ်ကြံခြင်း၊ သံဃာတော်များကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချ နှိပ်စက်ခြင်း၊ အဓမ္မ သင်္ကန်းချွတ်ခြင်း စသည့် သာသနာဖျက်လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်သည်မှာ ထင်ရှားသဖြင့်၊ စစ်အာဏာရှင်များအား သာသနာဖျက်၊ ဓမ္မာန္တရာယ်၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ အဖြစ် ပြည်ပရောက် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီးနှင့် သပိတ်မှောက် သံဃာတော်များက သတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် သာသနာပြု ဆရာတော်ကြီးများက ငြိမ်းချမ်းသောနည်းနှင့် စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းရေး၊ သံဃာတော်များကို အတုအယောင်များအဖြစ် စွပ်စွဲဖမ်းဆီး ရိုက်နှက်ထောင်ချနေသည်တို့ အမြန်ရပ်စဲရေး၊ အတိဒုက္ခရောက်နေကြသည့် သံဃာတော်များကို ကူညီစောင့်ရှောက် အားပေးရေး စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်၊ ပြည်ပရောက် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတရပ် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ရန် စည်းဝေးခဲ့ကြပြီး၊ အသံမစဲ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဆိုခြင်း၊ ပရိတ်ရွတ် ဆုတောင်း အမျှဝေခြင်းတို့ကို တညီတညွတ်တည်း ဆောင်ရွက်တော်မူလျက် ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်ပရောက် သာသနာပြု ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စ အ၀၀ကို စာရေးဆရာများနှင့် အနုပညာရှင်များက အပြည့်အ၀ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း၊ ကိုယ်၊နှုတ်၊ နှလုံး သုံးပါးလုံးဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆရာတော်များ ဦးဆောင်သည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေး ကြေညာ လိုက်ပါသည်။
Posted by MoeMaKha at 10:24 AM